ကိုကို မောင်လေး တို့ သတိရရဲ့လား လို့ ဆိုပြီး ပုံလေးတွေ တင်ပေး လိုက်တဲ့ နန်းမွေစံ…. – Shwe Naung
ကိုကို မောင်လေး တို့ သတိရရဲ့လား လို့ ဆိုပြီး ပုံလေးတွေ တင်ပေး လိုက်တဲ့ နန်းမွေစံ….
N N | May 23, 2021 | Celebrity | No Comments
မော်ဒယ်လ်နန်းမွေစံ ကတော့ လက်ရှိမှာ အောင်မြင် လျက် ရှိနေတဲ့ မော်ဒယ်လ်တွေ ထဲမှာ တစ်ယောက် အပါအဝင်ဖြစ်ပြီး အနုပညာအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင် လျက်ရှိနေကာ ကြော်ငြာတွေ ကို လည်း ရိုက်ကူး လျက်ရှိ နေသူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အမိုက်စားဖက်ရှင် လေးတွေကို ဝတ်ဆင် လေ့ရှိတဲ့ သူမကတော့ မိန်းကလေး ပရိသတ် တွေရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှုရော ယောကျာ်းလေး ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှုကိုပါ အခိုင်အမာရယူ ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ မော်ဒယ်လ် တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးတွေ ကို လူမှုကွန် ယက်စာမျက်နှာထက် တင်ပေးလေ့ရှိတဲ့ သူမ ကတော့ ပရိသတ်တွေ ရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရယူ ထားနိုင်သူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်းအလှကို ပိုင်ဆိုင် ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ သူမကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် လေးဆို ရင်လည်း မမှားပါဘူး။ သူမကတော့ ယခုမှာ အလန်းစား ဖက်ရှင်လေး ကြောင့် ဆွဲဆောင် မှုရှိတဲ့ အလှ တရားလေးပေါ်လွင်နေပြီး အမိုက်စားပိုစ့်လေးတွေပေးနေခဲ့ပါတယ်။
သူမကတော့ ” သတိရရဲ့လား? 😘” ဆိုပြီး အမိုက်စား ပုံရိပ်လေး တွေနဲ့အတူ လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာ ထက်မှာ ရေးသားထားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ အသည်းယားစရာ ပုံစံလေးနဲ့ လှပနေတဲ့ ပုံရိပ်လေး တွေဟာ ပရိသတ်တွေကို အချစ်တွေပို စေခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်ပရိသတ် တွေအတွက် မော်ဒယ်လ်နန်းမွေစံရဲ့ အမိုက်စား ပုံစံလေးနဲ့ ကြွေလောက် စရာ ကောင်းလွန်းတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပြီး အဆိုပါ ပုံရိပ်လေးတွေကို အောက်မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
စနိုးကိုညီမ​လေး တစ်​​ယောက်​လို ကို ဖြိုးမြတ်အောင် က အရာရာသင် ​ကြား​ပေးပါတယ် ဆိုပြီးပြော လာတဲ့ စနိုးကြည်ဖြူ
ကြော်ငြာ ပုံရိပ်လေးတွေMTV လေးတွေ ရိုက်ကူးပြီး အနုပညာ လောကမှာ အောင်မြင်မှု တွေနဲ့ဆက်လက် ရပ်တည်နေတဲ့ ဝါဆိုမိုးဦးရဲ့ ဗီဒီယိုလေး……..
အတွင်းသားတွေ မြင်သာအောင် ဆက်ဆီကျကျ ပိုစ့်တွေ ပေးနေတဲ့ စုလှိုင်ဝင်းရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယို‌လေး……..
လူမှုကွန်ယက် မှာပျံ့နှံ့နေတာ နဲ့ပတ်သက်ပြီး ၂၀၁၉ခုနှစ်တုန်းက ရိုက်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုင်ဖိုင် ဟောင်းတစ်ခု ပုံကြီးမချဲ့ကြဖို့ ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောလိုက်တဲ့ မေပန်းချီ…
ဟေမာတံခွန်၊ ဆိုတဲ့မြန်မာ အမျိုးသမီးကြီးအဖြစ်NBC၊ChannelကNew Amsterdamဆိုတဲ့TV၊Seriesမှာ ဧည့်သည် သရုပ်ဆောင်၊GuestStar၊အနေနဲ့ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့ မင်းသမီး ကြီးမေဝင်းမောင်……